Nagu saabsan - Shanghai Qian Dan International Trade Co., Ltd
Shanghai Qiandan International Trade Co., Ltd la aasaasay sanadkii of 2005, wuxuu ka kooban yahay wax soo saarka iyo ganacsiga labada waaxaha ee beeraha waxyaabaha caag silicone.
Iyada oo ku saleysan warshad noo gaar ah, asaasay 1990, la technology sare iyo innovate awoodda ,aynu hore u helay macay Innovation, si fiican loo ilaaliyo aqoonsiga, aan hore files ee Shiinaha Custom.
Our Goal waa in ay keenaan waayo-aragnimo cusub ee alaabta silicone dhaqanka, kor u farxad isticmaalka, horumariyaan mar walba novel iyo qaabka nolol heer sare .
All alaabooyinka yihiin ansixiyey FDA / LFGB / DGCCRF , iyo warshad waxaa baadhaan NSF / BSCI / Disney / WSI / Costco / Kosher / ISO9001 iwm , si fiican uma shaqayn karo dhammaan shuruudaha macaamiisha kala duwan.
Iyada oo aynu dadaal joogto ah oo aan joogsan casriyeeyo our technology , oo dhan khadadka-soo-saarka waa la iswada ee workshops our. Our magac u adeegaya ka mid ah Costco, Fox Run, shaqabaq&foosto, Network Cuntada, Bath Bed & Beyond, Aldi , Senshukai , iwm. Oo innaguna waxaynu nahay qeybiyaha breadform gaarka ah ee Wadohoose® Global.
Our Aragtidooda Guud waa in la horumariyo degaanka silicone dhamaystiran iyo meelaha soda la xiriira, noqon one-stop qeybiyaha ah u adeega aad u baahantahay oo dhan, ka jikada si houseware , ka xirfadle in maalin kasta.
Qiimayaasha Core, Happiness u ah nolosha, Xirfad wax soo saarka, Joogtaynta waayo, hal-abuurnimo, Xuddun macaamiisha.
Ujeeddada ee soo socda 10 sano, aad u hesho heer sare in alaabta silicone, adeegaya ka badan 10000 macaamiisha daboolaya 100 dalalka, aannu u aragno oo u wada shaqeeyaan !